Xukumadda iyo Kulmiye Waxay ilaabeen Inay Shalay Ahaayeen Kuwii Ugu Mudaharaadka iyo Sawaxanka Badnaa .Gudoomiyaha Wadani Ee UAE.. | Burco Media
Xukumadda iyo Kulmiye Waxay ilaabeen Inay Shalay Ahaayeen Kuwii Ugu Mudaharaadka iyo Sawaxanka Badnaa .Gudoomiyaha Wadani Ee UAE..
November 12, 2013 | Filed under: Latest News | Posted by: farxaan
Hala doodo, waa wax hala hagaajo,Yaan la doodin oo sacabkuun hala tumo waa dibu-socodnimo iyo dictatorship-nimo
Shacabka reer Somaliland hore ayay u soo mareen xukun dictator-nimo oo ay ka dagaalameen. Waxay u hureen naf iyo maalba si ay isaga riixaan dictatorshipnimada iyo dulmiga. Waxa ku geeriyooday, ku dhaawacmay, ku mustaqbal waayay Mujaahidiin badan iyo shacab aad u tira badan oo aynu wada garanayno. Dadkaasi waxay higsanaayeen xoriyad, cadaalad, horumar iyo mustaqbal dambe oo ubad keeda loo yagleelo. Si himiladaa iyo hadafkaa loo gaadho waxay Bulshadu go’aansatay inay qaataan nidaam Dimuqraadiya oo ku salaysan ixtiraam, sinaan, talo wadaag, wadatashi iyo xuriyatal-qowl.
Waxaan uga socdaa, dhawaan ayaa xisbiyada mucaaradku ku dhawaaqeen “Dood Qaran” ama “Dood Cilmiyeed” taas oo lagaga doodaayo marxaladda maanta dalku maraayo. Ujeedaduna tahay xaggaynu u soconaa ama soconaaba, ma meel wanaagsan baynu maraynaa, ma waxbaa inaga khaldan mise waxbaa inaga dhiman – sidee wax loo hagaajiyaa ama loo toosiyaa. Hadaan si kale u dhigana wadadii toosnayd ma haynaa mise waynu ka weecanay.
Arinkaas guddi qabanqaabo ayaa loo saaray, nasiib daro, wuxuu sas geliyay xukuumada iyo xisbigeeda Kulmiye , ujeedaduna tahay Durbaanka iyo Sacabka ha naloo tumo oo kaliya sidii Siyaad Barre, Taas oo aynu shalay ka dagaalanay wixii ka dhacayna ogaayeen.
Waxay ilaabeen inay ku yimaadeen dimuqraadiyad, waxay xukunka ku haystaan dimuqraadiyad, waxay dantooduna tahay dimuqraadiyad kuna joogi karaan dimuqraadiyad. Waxay diidayaan wada-hadalka, dooda, wada-tashiga iyo dhaliilaha loo soo jeediyo ee la doonaayo in wax lagu saxo. Waxay ilaabeen, shalay inay ahaayeen kuwii ugu buuqa badnaa, mudaaharaadka iyo sawaxanka badnaa ee lahaa wadanku wuxuu u baahan yahay “Shir Beeleed”. Xaalku waa “la joojiyaana banaan la jiifiyaana banaan”. Laakinse, shacabku taa wuu ka soo koray oo bisayl siyaasadeed buu gaadhay laguna beer laxawsan kari maayo waxaan jirin.
Waxaan uga socdaa, waa la dhaafay wakhtigii been abuurka ee dadka dhegta xoos wax loogu saari jiray. Shacabka reer Somaliland, waxay gaadheen bisayl siyaasadeed, way kala yaqaanaan “Shir Beeleed” iyo “Dood Cilmiyeed” waxay kala yihiin. Waxay ogyihiin, dood cilmiyeedku inay tahay qiyaasta lagu fahmi karo xaaladda geedi socodka dimuqraadiyeed ee Somaliland shacabkeedu qaateen ee higsanayaan.
Waxaa cad, inaanay xisbiyada mucaaridku ku dhawaaqin “Shir Beeleed” sidoodii oo kale, kuna talinayn. Waxaa hubaal ah, xisbiyada mucaaridku uga lexa-jeclo badan yihiin xukuumadda Siilanyo oo dalka xumaan la doonayn. Taasina waa ujeedada ama hadafka Shacabka Somaliland u samaysatay una igmaday Axsaabta mucaaridka.
Guntii iyo geba gabadii, Ninka Dood Qaran diidani waa nin wanaaga Somaliland diidan.
Abdi Kaariye Jibril
Gudoomiyaha Xisbiga WADANI
Isutaga Imaaraadka Carabta (UAE)